Home Wararka Rooble oo dhaqaale iyo awood qaybsi ku badashay qadiyadii Ikraam & doorashada
Rooble oo dhaqaale iyo awood qaybsi ku badashay qadiyadii Ikraam & doorashada
Waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa soo ifbaxaya qiyaanada uu Ra’isal Wasaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu u gaystay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska Ikraam Tahliil. Sida ay ilo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen MOL, RW Rooble ayaa dhaqaale ku iibsaday qadiyadihii aasaasiga ahaa ee uu ku huntay taageerada shacabka Soomaaliyeed.
Ilaa iyo markii uu ka soo laabtay safarkii Qatar oo dhaqaale lagula soo heeshiiyay, waxa uu gabi ahaanba ka baxay qorshooyinkii iyo balamihii uu horay u qaaday. Dowlada Qatar ayaa caruurtiisa iyi asagaba uga iibisay guri magaalada Doha ee dalka Qatar, waxaa kaloo la siiyay dhaqaale uu baahi badan u qabay.
Rooble oo baahi badan u qabay in uu dhaqaale ka sameeyo kuriga uu ku fadhiyo ayaa durbadiiba waxa uu bilaabay in uu si toos ah ula heshiiyo Farmaajo, waxaana lagu heshiiyay awood qaybi isaga oo gabi ahaanba joojinaya howlihii uu ka waday dacwada Ikraam Tahliil iyo dardar galinta arimaha doorashooyinka. Qaar kamida wasiiradii uu magacaaba ayaa dhankooda durbadiiba bilaabay in ay dhaqaale ka sameeyay xafiiskyadii loo dhiibay.
Marka hogaanka dalka loo dhiibo qof baahi dhaqaale haysa, isla markaana aan lahayn aragti Qaran waxa ka dhalan karo waa cawaaq xumida maanta hortaala shacabka Soomaaliyeed. Rooble ayaa hada waxa uu bilaabay in uu si madadaalo ah uu ku wado doorasho been abuur ah. Bishii dhowr xildhibaan ayaa la soo saarayaa si waqti loo lumiyo. Soomaali waa in ay ka tashataa labadaa nin ee ku heshiiyay khayaanada iyo burburinta qaranimada Soomaaliya.
Waxaa nasiib xumo ah in Rooble uu mustaqabalkiisii siyaasaded ku badashaday dhaqaale yar iyo waqti dheeraad ah oo uu ku sii fadhiya kurisga Ra’iisal Wasaaraha. Waxaan shaki ku jirin in uu siyaasad ahaan la dhiman doono ina Farmaajo. Ma aha kaliya in uu isagu ka bixi doona qadka siyaasada ee waxa uu dhaawacay fursada ay yeelan kartay beesha uu ka dhashay oo ay adkaan doonto in Soomaali mas’uuliyad mar kale ku aaminto.